Ruushka oo ku hanjabay inuu duqeynayo dekedaha dhaca Badda Madow | dayniiile.com
Home WARKII Ruushka oo ku hanjabay inuu duqeynayo dekedaha dhaca Badda Madow
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka, Sergei Lavrov, ayaa beeniyey in dagaalka Ukraine uu keenayo dhibaato cunto oo si guud caalamka u saameysa – inkastoo uu sare u kac ku yimid qiimaha ay sabab u tahay hakadka ku yimid waxyaabihii ay dibadda u dhoofin jirtey Ukraine.
Waxa uu hadalkan jeediyey kadib kulan uu magaalada Ankara kula qaatey dhiggiisa Turkey-ga, Mevlut Casusoglu, kaasi oo isku dayaya inuu dhex-dhaxaadiyo heshiis lagaga qaadayo xanibaadda badarka ama cuntada laga dhoofinayo dekedaha Ukraine.
Mr Lavrov, ayaa sheegay in Ruushka uu diyaar u yahay inuu qarxiyo dekedaha dhaca Badda Madow, haddii dowladda Ukraine ay isku daydo iney wax dhoofiso. Madaxa Golaha Yurub, Charles Michel, ayaa kahor yimid mowqifka Ruushka, isagoo ku tilmaamey been la dhoodhoobay.
Waxa uu sheegay in Ruushka uu qadiyadda cuntada ka dhigayo wax hub oo kala ah, iyadoo uu xanibay dekedaha Ukraine, wuxuuna Ruushka ka dhigay dhul beereed goob dagaal, natiijadana ay noqotey macaluul caalami ah.
Madaxa Barnaamijka Cuntada Adduunka, ayaa ka digay in haddii aan la furin dekedaha Ukraine, ay noqon doonto “ku dhawaaqid dagaal”, taasoo la xiriirta helitaanka cunnada Adduunka.
Previous articleHoggaamiye katirsan xisbiga talada haya ee Hindiya oo loo xirey meel ka dhac uu u geystay Muslimiinta
Next articlecaleema saarka Madaweynaha Soomaaliya Xasan shekh oo caawa laga dareemayo Muqdisho.
Xafladda Dhaarinta Xildhibaannada Baarlamaanka 11-aad oo gaarayay 320 oo la soo...
The ‘city of unity’ in Italy is hosting Eid Al-Fitr celebrations.
Waa Kuma Aadan Madoobe, Guddoomiyaha Cusub Ee Golaha Shacabka?
Mohamed Abdullahi Mohamed - April 28, 2022 0